मेरो प्रगति भएको सूर्य के हो? - संकेत
मेरो प्रगति भएको सूर्य के हो?
प्रश्नहरू र उत्तम उत्तरहरू - प्रगति सूर्य संकेत
कोप्रगति सूर्यप्रति वर्ष एक डिग्री को बारे मा सर्छ, र कसरी तपाईं एक व्यक्ति को रूप मा परिपक्व र बढ्छ देखाउँदछ, र तपाईं कसरी बुढेपछि परिवर्तन। को प्रभावप्रगति सूर्यपहलू लगभग एक वर्षको लागि रहन्छ पहिले र पहल ठीक हुन्छ।
यदि तपाईं कुनै जन्मजात चार्ट (तपाईंको वा अरू कसैको) लाई हेर्नुभयो र छिटो हेरेर व्यक्तित्व र सामान्य जीवन अनुभवहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटकहरू के हुन् भनेर यो महान कुरा हुनेछैन र? यो कसरी भयो यो हो। पहिले, तपाईंलाई एक जन्मजात चार्ट चाहिन्छ। तपाईंको उदाहरणको रूपमा प्रयोग गरौं, यदि तपाईंसँग यो उपलब्ध छैन भने, यहाँ मेरो सरल र प्रयोग गर्न सजिलो जन्मजात चार्ट क्यालकुलेटर हो।
दिमागमा राख्नुहोस् कि यस क्यालकुलेटरले नक्षत्रहरूको वास्तविक आकार र स्थान प्रयोग गर्दछ साईड्रियल ज्योतिष। सावधान हुनुहोस् कि तपाईका केहि संकेतहरू फरक छन्, कृपया यस छोटो लेख हेर्नुहोस् र यसलाई राशिको संकेतको बारेमा अधिक जानकारीको लागि विस्तारपूर्वक वर्णन गर्दै अब सुरु गरौं। कुनै पनि ज्योतिषीय चार्टमा त्यहाँ तीन मुख्य घटकहरू छन्: घरहरू, स ,्केतहरू, र ग्रहहरू।
घरहरूले तपाईंको जन्मको समयमा स्वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। अझ स्पष्ट रूपमा, ग्रहण, जुन आकाशमा ग्रहहरू हिड्दछ। घरहरू कुंडलीको कंकाल बनाउँछन् र जहिले सबैका लागि एकै ठाउँमा हुन्छन्।
यदि तपाईं आज प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, चार्टको बायाँ भागले पूर्वी क्षितिजलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, जसलाई आरोही वा आरोहीको रूपमा पनि चिनिन्छ। यो रेखाचित्रको सुरूवात हो, र घरहरू यहाँ सुरु हुन्छन्। पहिलो घर १२ औं काउंटरक्लॉक दिशामा सर्दै सुरू गर्नुहोस्। (नोट गर्नुहोस् कि ज्योतिषीहरूले विभिन्न घर प्रणालीहरू प्रयोग गर्छन्।
त्यसोभए आरोही पहिलो घरमा कतै हुन सक्छ, वा तपाईंले याद गर्न सक्नुहुनेछ कि घरहरू आज हामी प्रयोग गर्ने प्रणालीमा छ र जुन मेरो क्यालकुलेटरले प्रयोग गर्दछ उही घर प्रणाली भनिन्छ जुन ग्रहणलाई चक्रबाट १२ बराबर भागमा विभाजन गर्दछ। तपाईले मन पराउनु भएको जुनसुकै प्रणाली प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।) सीधै विपरित वंशज हुन् जो तपाई कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, पश्चिमी क्षितिज वा दृष्टिकोण हो।
रेखाचित्रको माथिल्लो भागले आकाशमा रहेको ग्रहणको उच्च भाग र तल्लो भाग, क्षितिज वा अदृश्य आकाश मुनि रहेको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यी घरहरूको चित्र को अर्थ के हो? किनकि घरहरूले स्वर्गका क्षेत्रहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ: ज्योतिषशास्त्रमा घरहरूले जीवनको क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। पहिलो घरबाट सुरू गर्दै, जुन हाम्रो जीवनका सबै क्षेत्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन आफैसँग गर्नुपर्दछ जस्तै आत्म-छवि, प्रेरणा, हाम्रो लक्ष्य, हाम्रो शारीरिक शरीर, हाम्रो उपस्थिति आदि।
दोस्रोले हाम्रो मानहरू आदिलाई गर्नुपर्दछ। घरहरूले हामीलाई 'जीवनका क्षेत्रहरू' भन्न सक्ने प्रतिनिधित्व गर्दछ। जन्मजात चार्टको अर्को अंश भनेको तपाईको जन्मको समयमा ग्रहण राशिको चिन्ह हो।
कुन चिन्ह गुलाब, कुन सेट? यो जहाँ व्यक्तिगत व्याख्या सुरु गर्न सक्दछ, किनकि अब हामीसँग चित्र को चित्रण गर्ने दुई कम्पोनेन्टहरू छन्। एकले भन्न सक्दछ कि स्वर्गको गुणहरू तपाइँको जन्मको समयमा देखाउँछन्। उनीहरूले के प्रतिनिधित्व गर्छन् भनेर सम्झन सजिलो तरीका भनेको उनीहरूको जीवनको सुविधाहरूको रूपमा हेर्नु हो।
मीनको ग्रहण योग्यतामा मेषको प्रत्यक्षता देखि राशि चक्रले हाम्रो जीवन घटक टी, ग्रहहरू मार्फत आउने गुणहरू देखाउँदछ जुन हाम्रो जीवनका अनुभवहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। स्वर्गमा यी ईफिमेरल शरीरहरूले पृथ्वीमा हाम्रो छोटो अनुभवहरू प्रतिबिम्बित गर्दछन्। सधैं जस्तो, यी अनुभवहरूले हाम्रो व्यक्तित्व आकार दिन्छ।
कुन घरमा एउटा ग्रह अवस्थित छ यसले हामीलाई कुन क्षेत्रमा यी जीवनका अनुभवहरू देखाउँदछ; कुन अनुभवहरू समावेश यी सुविधाहरू। हाम्रो व्यक्तित्वको सन्दर्भमा, घरहरूले जीवनका कुन क्षेत्रहरू हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू हुन् भनेर देखाउँदछ; लक्षणहरू जुन हाम्रो व्यक्तित्वमा बाहिर खडा हुन्छन्। ग्रहहरूको जीवनको अनुभवहरूको रूपमा सोच्नु सजिलो छ जुन हाम्रो व्यक्तित्वलाई आकार दिन्छ।
अब तपाईंको कुंडलीले तपाईंको बारेमा के भन्छ हेरौं। जन्मजात चार्टको सामान्य विश्लेषणमा, अब सबैभन्दा पहिले आधारभूत तत्त्वहरूको साथ सुरु गरौं। अर्को शब्दहरु मा, तपाइँको व्यक्तित्व को सब भन्दा आधारभूत तत्व र तपाइँको समग्र जीवन अनुभवहरु।
त्यहाँ चार्टको चार मुख्य कम्पोनेन्टहरू छन् जुन यो देखाउँदछ। तपाईंको सूर्य, चन्द्रमा, आरोही, र आरोही शासक, जुन तपाईंको चार्ट शासकको रूपमा पनि चिनिन्छ। अनिवार्य रूपमा, हामी यी चार कम्पोनेन्टहरूको घर र साइन पोजीशनहरू खोज्दैछौं (आरोहीको अपवाद बाहेक, जसले केवल चिन्ह मात्र देखाउँदछ, तर हामी त्यसलाई पछि प्राप्त गर्नेछौं)।
तपाईंको सूर्य र चन्द्रमाबाट सुरु गरौं। यी दुई तत्वहरू सबैभन्दा आधारभूत र आवश्यक प्रतिनिधित्व गर्दछ, यिन) र यang्ग, आफैंका तत्त्वहरू सूर्यले तपाईंको बाहिरी-देखिने, अभिव्यक्त गर्ने र पुल्लिंगी पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। जबकि चन्द्रमा तपाईंको भित्री देखिन्छ, परावर्तनशील, महिला पक्ष प्रतिनिधित्व गर्दछ।
एक साथ, यी ग्रहहरू तपाईंको भित्री र बाहिरी व्यक्तित्वको बहुमत बनाउँछन्। तपाईको राशिफलमा सूर्य र चन्द्रलाई असर गर्ने स्थिर अनुभवका प्रकारहरूको साथ। तिनीहरू यहाँ यी प्रतीकहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
एकचोटि तपाईंले घर र तपाईंको सूर्यको र घर र तपाईंको चन्द्रमाको स्थान स्थिति दुबै पहिचान गर्नुभयो, यी पीडीएफहरू प्रयोग गर्नुहोस् तपाईंको भित्री र बाहिरी स्वभावको यी आधारभूत तत्त्वहरू के हो पत्ता लगाउनको लागि सम्झनुहोस् कि घरको स्थानले जीवनको क्षेत्रहरू देखाउँदछ। त्यो तपाईंको लागि महत्त्वपूर्ण छ र तपाईंको जीवनमा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू। चिन्हले तपाईंको व्यक्तित्व र तपाईंको जीवन अनुभवहरूको परिणामहरूको गुणहरू देखाउँदछ। तपाईंको सूर्यले तपाईंको बाह्य आत्मालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ र चन्द्रमाले तपाईंको भित्री स्वयंलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।
अब तपाईंको एसेन्डन्ट र चार्ट शासकहरू हेरौं। यी तत्वहरूले अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्दछन् कि तपाईंको जीवन कसरी देखा पर्दछ र तपाईंको व्यक्तित्वलाई समयसँगै कस्तो आकार दिन्छ। तपाईं आफ्नो सूर्य र चन्द्रमा जस्तै हुनुहुन्छ, जीवन पथ र जीवन घटनाहरूको अपवादको बाहेक जसले तपाईंको व्यक्तित्वलाई थप आकार दिन्छ।
तपाईं यो बन्ने कुराको लागि सोच्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई र तपाईंको जीवनको राशिफलमा कडा प्रतिनिधित्व गर्दछ। तपाईंको आरोहीले गुणहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन तपाईं आफ्नो जीवन अनुभवहरूको परिणामको रूपमा विकसित गर्नुहुन्छ। त्यहाँ केवल एक चिन्ह सम्बन्धित छ किनकि यो सँधै पहिलो घरसँग सम्बन्धित छ।
अर्को तिर तपाईको नक्शा शासक अनिवार्य रूपमा ग्रह हो जुन तपाईको Ascendantis को चिन्हलाई नियम दिन्छ। घर र साइन स्थिति चार्ट शासकले अधिक विस्तृत हेराइ देखाउँदछ, केवल तपाईंले विकास गरिरहनु भएको लक्षणहरूमा मात्र होइन तर जीवनको क्षेत्रमा पनि। पहिले, तपाईंको बढ्दो साइन पहिचान गर्नुहोस्।
हामीले पहिले प्रयोग गर्नुभएका समान पीडीएफ प्रयोग गरेर यस पात्रको गुणहरू हेर्नुहोस्। याद राख्नुहोस्, यी गुणहरू हुन् जुन तपाईंको समग्र जीवन अनुभवहरूको माध्यमबाट देखा पर्दछ र तपाईंलाई बनाउँछ जो तपाईं बन्नुहुनेछ। यी धेरै महत्त्वपूर्ण गुणहरू हुन् जुन तपाईंले आफ्नो जीवनमा विकास गर्नुपर्दछ।
अब तपाईंको चार्ट शासक पहिचान गर्नुहोस्। Q पहिला, तपाईंले जान्नु आवश्यक छ कि कुन ग्रहले तपाईंको आरोहणको चिन्ह शासन गर्दैछ। प्रत्येक राशिचक्र संकेतहरूको लागि शासकहरूको सूची प्राप्त गर्न यहाँ यस पीडीएफ प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईले दुईजनालाई भेट्टाउन सक्नुहुन्छ जुन केसमा तपाईले दुबै ग्रहलाई चिन्ह लगाउनुहुन्छ जस्तो कि ती पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। एकचोटि तपाईंले आफ्नो चार्ट शासकलाई पहिचान गर्नुभयो, यसको घर र चरित्र प्लेसमेन्ट फेला पार्नुहोस्, जस्तो तपाईंले सूर्य र चन्द्रसँग गर्नुभयो। हामीले पहिले प्रयोग गरेका उही पीडीएफहरू प्रयोग गर्नुहोस् जुन जीवनको कुन क्षेत्र र लक्षणहरूले तपाईंको व्यक्तित्वलाई समयको साथ आकार दिन्छ चार्ट चार्टरले अनिवार्य रूपमा तपाईंलाई कुंडलीमा प्रतिनिधित्व गर्दछ र के विकास हुँदैछ भनेर।
तपाईंको विश्लेषणको यस विन्दुमा तपाईंले जन्मजात चार्टको चार सबैभन्दा आधारभूत तत्वहरू फेला पार्नुभयो। एक्लै यी चार कम्पोनेन्टहरूको विश्लेषण र समझनाले आफैं र तपाईंको उत्कृष्ट जीवन अनुभवहरूको ठूलो समझमा थप्नेछ। तपाईं समान प्रक्रिया कुनै पनि व्यक्तिको रेखाचित्रमा लागू गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंहरू जो विश्लेषणलाई अगाडि बढाउन चाहानुहुन्छ, कुञ्जी संघहरूलाई यी चार कम्पोनेन्टहरू र अन्य ग्रहहरूको बीचको फारमलाई तलको चार्टमा राख्नुहोस्। यसलाई पक्षहरू भनिन्छ। ती पक्षहरू या त कुंडलीको छेउमा वा दुबैमा फेला पार्न सकिन्छ।
यहाँ तपाईंको थप विश्लेषणको लागि विभिन्न पक्षहरूको महत्त्वको साथ एक पीडीएफ छ। अर्को, तपाईं भित्री ग्रहहरू बुध, शुक्र, र मंगलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मध्य ग्रहहरू: बृहस्पति र शनि।
बाह्य ग्रहहरू युरेनस र नेप्च्यून द्वारा अनुसरण गरिएको। र धूमकेतु: चिरोन र प्लूटो। तिनीहरूको घर र चरित्र प्लेसमेन्टहरूको विश्लेषण।
नोट गर्नुहोस् कि व्यक्तित्व लक्षण गहिरो र कम स्पष्ट हुँदै जान्छ किनकि तपाईं टाढा टाढा पर्ने ग्रहहरूमा जानुहुन्छ। एक प्याज जस्तै समान जहाँ हाम्रो व्यक्तित्व र अनुभवको बाहिरी तह चार मुख्य घटकहरू हुन् जुन हामीले यस लेखमा राख्यौं। पछिल्लो भित्री ग्रहहरू, केन्द्र, त्यसपछि प्याजको बीचमा बाह्यहरू। (एक साइड नोट को रूप मा, पहिलो घर मा ग्रहहरु को लागी विशेष ध्यान दिनुहोस् को लागी उनी व्यक्तित्व र अनुभव मा मजबूत माध्यम लाग्छ।) यहाँ प्रमुख ग्रहहरु को एक सूची छ जसले यो दर्शाउँछ कि स्वयं र अनुभव को कुन तत्वहरु लाई प्रतिनिधित्व जीवन मा।
निरन्तर अभ्यासको साथ, यस लेखमा वर्णन गरिएको मूल चार्टको चार मुख्य कम्पोनेन्टहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, तपाईं एक मिनेट को एक मामला मा, चाँडै एक जन्मजात चार्ट चार्ट व्याख्या गर्न सक्षम हुनेछ।
तपाईको प्रगतिशील चार्ट के हो?
'TOप्रगतिशील चार्टसर्तमा तपाईंको लागि के भइरहेको छ देखाउँदछतपाइँकोव्यक्तिगत विकास;कोआन्तरिक स्तरमा तपाईंको लागि भइरहेको परिवर्तनहरू। 'बीस २०१।
नमस्ते। मैले धेरै वर्षहरू सद्भाव, तार, रचना, प्रबन्ध, र धेरै वर्ष मानिसहरूलाई ती चीजहरू सिकाउने क्रममा बिताएको छु, र एउटा प्रश्न जुन पपिंगमा रहन्छ जब पनि मानिसहरूले सद्भाव वा कम्पोजि or गरिरहेछन् वा जे पनि सधैं, कुन chord कुन विकसित हुन्छ भन्ने बारे सँधै चिन्ता लिनुहोस् कुन अन्य chord मा। र धेरै व्यक्तिहरू कुनै प्रकारको खाकाको लागि सोध्छन्, ठीकै, यदि मसँग यो जटिल प्रगति छ जुन यस परिस्थितिमा सँधै कार्य गर्दछ भने, त्यो के हुन्छ? र यी चीजहरूको बारेमा कुरा गर्न सम्भव छ।
यो प्रकारको हल्का साical्गीतिक स्वास्थ्य चेतावनीको साथ आउँदछ किनकि तपाईं सँधै कुनै प्रकारको स्ट्रेटजेकेटमा फस्न चाहनुहुन्न, सँधै जव म पछि चक्र चौथोको पीछा हुन्छौं र रागा आई पछिको तारो I पछि तपाईंलाई थाहा हुन्छ यो राम्रो लाग्नेछ। , तर यसले तपाईंको संगीतको जीवनमा समय दिन सक्दछ जब तपाईं ब्रँक आउट गर्न चाहनुहुन्छ र केही फरक गर्न चाहनुहुन्छ। र निस्सन्देह त्यहाँ धेरै रोचक चीजहरू छन् जब यो क्रोमेटिक तारहरू जस्तै घट्ने सातौं र बढेको छैठौं र नेपोलिटन तारहरू र यी सबै चीजहरू प्रयोग गर्न आउँदछ, चीजहरू तपाईं कुञ्जीहरू बीचको मोड्युल गर्न गर्न सक्नुहुन्छ, थोरै पप र color्ग, माध्यमिक प्रमुखहरू जस्ता। , ती सबै चीजहरू जुन म वास्तवमै यस फिल्मको बारेमा कुरा गरिरहेको छैनँ, तर जब तपाईं केवल एउटा कुञ्जीमा हुनुहुन्छ र तपाईंलाई त्यो कुञ्जी हातमा छ र तपाईं यो जान्न चाहानुहुन्छ कि त्यो काम कसरी राम्रो गरी विकसित हुन्छ? यस तालिकाले तपाईंलाई त्यससँग मद्दत गर्नुपर्दछ।
त्यसोभए, हामी थोरै मात्र अन्वेषण गरौं र हामी कस्तो छौं भनेर हेरौं, चोर III एक तार न हो जुन तपाईले प्राय जसो सामान्यतया प्रयोग गर्नुहुनेछ, तर यो एकदम व्यावहारिक तार हो, र केहि मानिसहरू जहिले पनि प्लेड जस्ता चोर III लाई बेवास्ता गर्छन्, राम्रो, तपाईसँग हुनुपर्दैन, तर तपाई होईन म तपाईको टुक्रा भर कोर्ड III प्रयोग गरिरहेको छु। तर एउटा प्रमुख कुञ्जीमा, हामी मुख्य कुञ्जीहरूमा तार प्रगतिहरूको बारेमा कुरा गरिरहेको हुनाले, सानो कुञ्जीहरूको बारेमा अर्को चलचित्रमा फिर्ता आउनुहोस्। यदि तपाईं तारिख III छ भने, तारांक III बाट सबै भन्दा राम्रो प्रगति Chord VI मा जानु हो।
यद्यपि तपाईं चीजहरू व्यवस्थित गर्नुहुन्छ, चोरड III प्रायः उत्तम छोर्ट VI को पछाडि हुन्छ, र एउटा कारण हामी मानिसहरूलाई यसो भन्छौं कि चोरड III लाई त्याग्नुहोस्, व्यक्तिगत रूपमा, म वास्तवमै त्यसो गर्दिन, तर धेरै मानिसहरूले गर्छन् 'तिनीहरू भन्छन्,' जोगिनुहोस् तार तृतीय, यो धेरै समस्या हो। 'अर्को राग र प्रगति पनि राम्रो लाग्दैन। तसर्थ, VII मा III सामान्यतया यसलाई व्यवहार गर्ने तरिका हो।
तर यदि तपाईं VI को तारको साथ शुरू गर्नुहुन्छ भने यसको मतलब तपाईले कुनै क्रममा जानुपर्दैन यदि VI VI को साथ शुरू गर्नुभयो र सोच्नुहोस्, 'ठिकै छ, मैले VI के तर्कालाई राम्ररी कसरी पछ्याउँछु भनेर अचम्म लाग्छ।' यस तालिकाले तपाईंलाई चोर IV मा जान सुझाव दिन्छ। वा तार II मा जानुहोस्।
त्यसोभए यदि मसँग chord छ र म चोर IV मा जान्छ भने यस्तो लाग्छ। वा यदि मसँग सेर्ड VI छ र म chord II मा जान्छु भने यस्तो लाग्छ। त्यसोभए तपाईले यी दुई प्रगतिहरू ठूलो काम सुन्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं चक्र IV छ भने, राम्रोसँग तपाई त्यो chord II का साथ अनुसरण गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले मसँग एक IV तारो छ र म यसलाई II chord का साथ अनुसरण गर्छु। त्यसोभए यो एकदम राम्रो प्रगति हो।
वा यदि तपाइँ IV को साथ अरू केहि गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ पातलो VII मा पातलो के हुन सक्नुहुन्छ। ठीक छ कि, सातौं जीवा अक्सर एक राग हो कि मानिसहरूले भन्छन्, 'तपाईं जे पनि गर्नुहुन्छ, एक VII तार प्रयोग नगर्नुहोस्।' कोर्ड III को उपयोग गर्न कोशिस नगर्नुहोस् तर तपाईले जे गर्नुहुन्छ, 'एक Chord VII प्रयोग नगर्नुहोस्' 'वास्तवमा, Chord VII धेरै उपयोगी छ, तर सामान्यतया Chord VII जरामा धेरै राम्रो काम गर्दैन तर यसले धेरै राम्रो काम गर्दछ। यसको पहिलो उल्टो।
मूल स्थितिमा यसले राम्रोसँग काम नगरेको कारण यो हो कि यो घट्दै गएको छ र जरा स्थितिमा थोरै कुरूप लाग्छ। यसलाई पहिलो उल्टोमा राख्नुहोस्, तपाईंले फेला पार्नुहुनेछ यो ठीकै काम गर्दछ। त्यसोभए यदि तपाइँ IV तार्डबाट सुरू गर्न लाग्नुभयो र त्यसपछि VIIb तारामा जानु भयो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि त्यो वास्तवमै काम गर्न सक्दछ।
त्यसोभए, यस टेबलमा तपाई IV बाट VIIb I सम्म जान सक्नुहुन्छ। IV, VIIb, I. त्यसोभए तपाईले देख्नुभयो कि यो एकदम राम्रो छ, कडा प्रगति हो, होइन र? त्यसैले त्यहाँ एक VIIb छ।
तपाई II बाट VIIb मा जान चाहानु सक्नुहुन्छ। त्यसोभए यहाँ एक II, र त्यसपछि VIIb छ, र त्यसपछि सम्भवतः त्यहाँबाट I सम्म। त्यसोभए तपाईले देख्नुहुनेछ कि कसरी ठीक काम गर्दछ।
तपाईं II बाट V. II, V मा जान सक्नुहुन्छ, र त्यसपछि प्राय जसो en लाई पछ्याइन्छ। धेरै कैडहरू II-VI मा जान्छन्।
VIIb ममा जान्छ तर यो V मा जान्छ। त्यसैले हामी VIIb जीन पाउन सक्दछौं र त्यसपछि V मा जान्छौं र त्यसपछि सम्भवतः I को लागि।
यी ताराहरूको प्रगतिहरूसँग व्यवहार गर्ने धेरै अलग तरीकाहरू। र पक्कै पनि जब तपाईं Chord I मा पुग्नुहुन्छ। वास्तवमा, सबै तारा त्यहाँबाट पछ्याउँदछ।
त्यसोभए यदि तपाइँ केवल चोर प्रगतिहरूको बारेमा अलि बढी आत्मविश्वास महसुस गर्न चाहानुहुन्छ भने, म यसो भन्दिन कि यो तालिका सिक्नु आवश्यक पर्दैन, तर तपाइँ यसका वरिपरि खेल्न चाहानुहुन्छ र विभिन्न कुञ्जीमा सबै फरक क्रमविकासहरू गर्न कोशिस गर्न सक्नुहुन्छ। । र त्यसोभए तपाईं त्यस मार्फत जान कोशिस गर्न सक्नुहुनेछ, उदाहरणका लागि यदि मैले शीर्ष शीर्ष शासकलाई पछ्याएँ भने कस्तो आवाज आउँछ? अर्को बाटोमा जानुहोस्, म त्यस बाटोबाट तल जान सक्दछु, त्यसैले तेश्रो III, तारो VI पछि, तारो I पछि, तारो V पछि, त्यसपछि I जव I पछाडि जान्छ।
त्यसोभए यसको मतलब यो होइन कि तपाईले सँधै आईआईआई कोर्डबाट सुरू गर्नुहुन्छ, यो कुनै विचार होइन, त्यसैले यसलाई VI सँग अनुसरण गर्नु उत्तम हुन्छ। यो नियम होईन, तर यसले प्राय: उत्तम कार्य गर्दछ। तर यहाँ अरू ताराहरू छन् जुन तपाईं जहिले पनि आउँनुहुनेछ, र विभिन्न जडहरू जुन ती भित्र जान्छन्, प्रगतिहरूको तालिकाको अन्वेषण गर्नुहोस्।
ज्योतिषमा प्रगति भनेको के हो?
जसरी यसको नामले सlies्केत गर्दछ, ज्योतिषीय प्रगतिजन्मकुंडलीको अगाडि भविष्यको विषयको जन्म वा सुरुको क्षणदेखि अगाडि बढ्ने विधि समावेश छ, र प्राय: कुनै खास व्यक्तिको जन्म वा नेटल चार्टको लागि गरिन्छ।
अबी, तपाईको प्रश्नको लागी धन्यवाद। जन्मजात चार्टमा पक्षहरूको व्याख्या मानिसहरूले सोचे भन्दा धेरै जटिल छ, विशेष गरी जब पक्ष दुई व्यक्तिगत ग्रहहरूको बीचमा छ। शुक्र ग्रहको साथ संयोजनमा चन्द्रको व्याख्या गर्न सम्भव छैन, यसमा समावेश चिन्हहरू, चन्द्रमाले शासन गर्ने घरहरू, शुक्रले शासन गरेको घरहरू, र उनीहरू सँगै बस्ने घर सहित।
जन्मजात चार्टमा भित्री ग्रहका केही पक्षहरू आधा चार्ट भन्दा बढी हुन सक्छन्! नेटल ज्योतिष, जुन कसरी ग्रहहरूको वास्तविक वा प्रतीकात्मक हिसाबले तपाईंको जन्मजात चार्टसँग सम्बन्धित छ भनेर हेर्नु समावेश गर्दछ, चीजहरूलाई अझ जटिल बनाउँदछ। मलाई माध्यमिक प्रगतिहरूको संक्षिप्त विवरण र उनीहरू कसरी प्राकृतिक चार्टसँग सम्बन्धित छन् भन्ने कुराको सुरूवात गर्न दिनुहोस्, र त्यसपछि म तपाईंको प्रश्नको विवरणहरूमा जान्छु। पूर्वानुमानित नेटल ज्योतिष एक सन्दर्भ को रूप मा तपाइँको अद्वितीय जन्म चार्ट प्रयोग गर्दछ।
सबै अन्य राशिफलहरू र ट्रिगरहरूले कसरी देखाउँछन् कि कसरी जन्मजात चार्टको क्षमता समयसँगै देखिन्छ। प्रगतिहरू तपाईंको जीवनमा महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको खुलासा देखाउन राशिफलको माध्यमबाट ग्रहहरूको दोस्रो गतिविधिको प्रयोग गर्दछ। यो तपाईंको जन्म चार्टमा ग्रहहरूको स्थितिबाट सुरू हुन्छ र त्यसपछि ती ग्रहहरूको स्थिति समयसँगै कसरी परिवर्तन भएको छ भनेर ट्र्याक गर्दछ।
प्रत्येक दिन जीवनको एक वर्ष को प्रतीक हो। उदाहरण को लागी, ग्रहहरु को स्थिति तपाईको जन्म पछि २ days दिन तपाईको अनुभवहरु अनुरूप छ जब तपाई २ 26 बर्षको हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ कि द्वितीयक प्रगतिहरू बाह्य घटनाहरू भन्दा आन्तरिक अनुभवहरूसँग बढी सम्बन्धित छ।
जब म माध्यमिक प्रगतिहरूको व्याख्या गर्छु, म तिनीहरूलाई आन्तरिक आवश्यकताहरू र विकासात्मक मूल्य परिवर्तनको रूपमा देख्छु। माध्यमिक प्रगतिहरू अझै पनि जन्मजात चार्टको सन्दर्भमा हेर्नु आवश्यक छ, र यो अलि मुश्किल हुन सक्छ। सबैभन्दा पहिले, जन्मजात चार्टले सधैं प्राथमिकता लिन्छ।
तपाईंको जन्म चार्टमा १० औं घरमा, चन्द्रमाले सधैं तपाईंको क्यारियर, जीवन मार्ग, र सार्वजनिक स्थिति प्रतिनिधित्व गर्दछ, यदि तपाईंले उन्नत चन्द्र एन्जिल्स चिन्हहरूलाई ध्यानमा राख्नुभयो भने पनि यसले तपाईंको क्यारियरसँग कसरी व्यवहार गर्ने परिवर्तनमा संकेत गर्दछ, जीवन मार्ग, र सार्वजनिक प्रतिष्ठा, तर १० औं घर संग जडान स्थिर छ। प्रगतिशील तालिकामा घरहरू फरक पर्दैन; केवल जन्म घरहरू महत्त्वपूर्ण छन्। म जन्म चार्ट वरिपरि दुई-व्हीलर वा तीन-व्हीलरको अंशको रूपमा प्रगतिशील चार्टहरू मात्र हेर्छु।
यस तरिकाले, उन्नत ग्रहले नियम बनाएको घरहरू बारे कुनै प्रकारको भ्रम छैन, र तपाईं केवल जन्म गृहमा चल्ने उन्नत ग्रहहरूको व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। यो प्रगतिशील चंद्र कन्जेक्ट प्रोग्रेसभिनस ब्लुप्रिंट टेम्प्लेट सेट जस्तो देखिन्छ: कन्जन्क्ट प्रोग्रेसिभ भेनस (भेनस नियम) मा प्रगतिशील चंद्रमा तपाईंको सुरक्षा आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि आन्तरिक आवश्यकता र अभिव्यक्ति र भावनाहरू अभिव्यक्तिको बीच फ्यूजन र इरादाको एकता (संयोजन) छ। (प्रोग्रेसमुन) एक तरीकाले (उन्नत चन्द्रमाको चिह्नसँग सम्बन्धित) विशेष रूपमा जन्ममा चन्द्रमाले शासन गरेको घरका मामिलाहरू समावेश गर्दछ र तपाईंको भित्री मूल्योंसँग अभिव्यक्त र पign्क्तिबद्ध गर्न तपाईंको भित्री आवश्यकतालाई प्रेम र सराहना गर्दछौं (उन्नत शुक्र) एक तरीकाले जुन विशेष (उन्नत भेनसको हस्ताक्षरसँग सम्बन्धित) जन्म शासित घरहरुका भावनाहरु र भावनाहरु (चन्द्रमा) लाई अभिव्यक्त गरेर र प्रेम र सराहनाको खोजीमा हेर्दै प्रतिक्रिया गरिन्छ (शुक्र) जन्म भएको घरमा उन्नत चन्द्र र शुक्रद्वारा। र यो एक साधारण प्रगति-प्रगति खाका हो किनकि यो एक संयोजन हो।
दुबै ग्रहहरू एकै घरमा बस्छन् र उर्जा एकल घरमा अनुभव हुन्छ। उदाहरणका लागि, शुक्रसँग उन्नत चन्द्र वर्ग हेर्दा तपाईले प्रत्येक उन्नत ग्रहले बसोबास गर्ने घरहरू पनि विचार गर्नुपर्दछ - दुई पटक - एक पटक ट्रिगरको दृष्टिकोणबाट र एकपटक प्रभावको दृष्टिकोणबाट। व्यक्तिगत रूपमा, म उन्नत पक्षहरूमा विरलै ध्यान दिन्छु।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, ती धेरै जटिल छन्। यसलाई व्याख्या गर्न धेरै समय र ऊर्जा लाग्छ र मलाई लाग्दैन कि मैले मेरो लगानीमा राम्रो प्रतिफल पाइरहेको छु। तपाईको माइलेज फरक हुन सक्छ
प्रगतिशील चन्द्रमा कति लामो चिन्हमा रहन्छ?
हाम्रोप्रगति भएको चन्द्रमासबै को माध्यम बाट जान्छसंकेतहाम्रो जीवन भर राशीको। योरहन्छप्रत्येकमाचिन्हकरीव २/२ वर्ष वा सो भन्दा बढीको लागि। यस तरीकाले काम गर्ने तरिका त्यो हो कि हामी हाम्रो दृष्टिकोण, परिप्रेक्ष्य र हरेक २/२ बर्षमा हेर्ने र महसुस गर्ने तरीका परिवर्तन गर्दछौं।
मेरो प्रगति भएको चन्द्रमा के हो?
तपाइँकोप्रगति भएको चन्द्रमातपाइँको विकसित भावनात्मक आवश्यकताहरूको बारेमा हो। कोप्रगति भएको चन्द्रमातपाइँको जन्म को आवश्यकता लाई प्रतिस्थापन गर्दैनचन्द्रमातर यसले तपाईंको भावनात्मक आवश्यकताहरूको लागि छोटो अवधिको अतिरिक्त तह ल्याउँछ जुन तपाईंको जीवनमा करीव २- years बर्ष सम्म अवस्थित हुन्छ।19 २०२१
प्रगतिशील आरोहण कत्तिको चाँडो हुन्छ?
तपाइँकोआरोहीचिन्ह, जुन तपाइँको शारीरिक शरीर र दिशा जीवन इंगित गर्दछ,प्रगतिप्रत्येक १ to देखि २० वर्षमा फरक चिन्हका माध्यम बाट। यो जब एक विशाल छसिफ्टव्यक्तित्व मा, हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य, शारीरिक उपस्थिति, बानी र जीवनमा पथ हुन्छ! तपाईको सम्बन्धहरु पनि ठूलो तरीकामा परिवर्तन हुनेछ।
चार्ट कति प्रगतिशील छन्?
कुनै प्रभाव छैन, वास्तवमा प्रयोग गर्दैप्रगतिशील चार्टहरूएकले स्वदेशीको जीवनमा हुने घटनाहरूको समयलाई मूल्या can्कन गर्न सक्दछ, तर कुनचाहिँ बच्चाको लागि प्रतिज्ञा गरिएको छैनचार्टप्रगति मा एक वचन द्वारा अनुभव गर्न सकिदैनचार्ट। प्रगति पश्चिमी ज्योतिष मा एक महत्वपूर्ण उपकरण हो र वैदिक ज्योतिष मा दासा प्रणाली जस्तै प्रयोग गरीन्छ।
प्रगति भएको चन्द्रमा कति चाँडो हुन्छ?
प्रगतिशील चन्द्र भनेको सब भन्दा द्रुत गतिमा चलिरहेको ग्रह हो, प्रत्येक साइनको लागि भ्रमण गर्दै(लगभग) दुई र आधा वर्ष। अधिकांश व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनमा कम्तिमा दुई पटक सबै संकेतहरू (आफ्नो प्रगतिशील चन्द्रमा मार्फत) अनुभव गर्ने मौका प्राप्त गर्नेछन्।3 २०१।।
तपाईं कसरी प्रगति गरिएको चार्ट पढ्नुहुन्छ?
यो राम्रो छपढ्नुलाईप्रगतिशील चार्टआफ्नो जन्म राखेरचार्टपा wheel्ग्राहरूको भित्र रप्रगतिशील चार्टबाहिर पट्टि। कोप्रगतिशील चार्टसबैभन्दा प्रस the्गको अर्थ हुन्छ जब यो जन्मसँग प्रयोग गरिन्छचार्ट। एकचोटि तपाईंले त्यसो गर्न सक्नुहुन्छपढ्नुयो तपाईं जस्तै एक सानो बिटपढ्नुएक ट्रान्जिटचार्ट।
मेरो प्रगतिशील संकेत के हो?
प्रगतिशील आरोहणवाराइजिंग चिन्हशारीरिक उपस्थिति, व्यक्तित्व, सम्बन्ध मा एक विकास प्रतिनिधित्व गर्दछ। एक उदाहरण को रूप मा, जबतपाईंको प्रगतिमा बढ्दोवृश्चिक मा सर्छ तपाई अझ प्रगाढ, गहिरो, रहस्यमय बन्नुहुनेछ र सम्भवतः थप स्थिर, कामुक र आकर्षक पार्टनरहरूलाई आकर्षित गर्नुहुनेछ।
के तपाईंको एसेन्डन्ट साइन परिवर्तन हुन्छ?
गणना कसरी गर्नेतपाईंको उदय चिन्ह। कोआरोही परिवर्तनहरूप्रत्येक दुई घण्टा, जुन यो किन यत्तिको महत्वपूर्ण हो जन्म जन्म व्याख्या गर्दा सही जन्म समय को।१ २०२०।